Iwo ekutanga mabhenji eiyo iPhone 7 ine A10 processor inosvinwa | IPhone nhau
Kana kuchine mazuva maviri asara ekuratidzwa zviri pamutemo kweiyo nyowani iPhone 7 uye iPhone 7 Plus, ruzivo rutsva rwune hukama nemidziyo iyi rwuri kubuda zuva nezuva. Mazuva mashoma apfuura takakuzivisa iwe neruzivo rwakaburitswa nemuongorori weKGI, Ming-Chi Kuo, maakataura kuti mamodheru matsva. ichave IPX 7 isingadziviriri mvura, pamwe nekuratidzira maviri matsva nzvimbo nhema uye gloss matema mavara, uchisiya padivi iyo grey. Asi zvakare yakasimbisa mune iro ruzivo kuti iyo iPhone 7 Plus inosvika kumusika ne3 GB ye RAM, kuwedzera kunodiwa kuti ukwanise kukurumidza kugadzirisa mifananidzo yakatorwa nekaviri kamera, inozove iri yega mune 5,5-inch modhi .
Nhasi hatisi kutaura nezve chero chitsva chekunze kana chemukati chechinhu chechigadzirwa, asi tiri kutaura nezvekuita kweprosesa nyowani, A10, kuti aya mamodheru matsva achabatanidza. Geekbench achangoburitsa bhenji rekutanga reiyo iPhone 7, hatizive kana iyo 4,7-inch modhi kana 5,5-inch modhi ine 3 GB ye RAM, nekuti maererano neruzivo rweyedzo ivo vakaitwa pa iPhone 7 ine 2 GB ye RAM, matiri kuona zvibodzwa mazana matatu nemakumi matatu nepfumbamwe nepfumbamwe. Iyo iPhone 3.379s Plus, parizvino iri pamusika, yakasvika 6 mamaki. Muchikamu chimwe chete ichi, iyo nyowani Samsung Galaxy Note 7 ine Exynos 8890 processor yakawana mamakisi 2.067,66 uye neiyo Snapdragon 820 processor yakasvika 1.896 mapoinzi.
Nekudaro, kana isu tikataura nezve multicore zvibodzwa, tinogona kuona kuti sei iPhone 7 zvibodzwa 5.495, ingangoita chiuru mapoinzi anopfuura iPhone 1.000s Uyezve, iyo yakasvika 4.404 8890. Kana tikazvienzanisa neiyo Exynos 7 yeGlass Note 6.311, iyo yakawanda-yepakati mamaki inopa 820 mhedzisiro, nepo neiyo Snapdragon 5511 yakawana mamakisi eXNUMX.
Izvo zviri pachena ndezvekuti kusvikira izvo zvekutanga zvigadzirwa zvasvika pamusika hatisi kuzosiya kusava nechokwadi nezve kugona chaiko kweiyo itsva Apple A10 processor.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Iwo ekutanga mabhenji eiyo iPhone 7 ine A10 processor inosvinwa
Mashandisiro ekushandisa iyo Split View chimiro muSafari neIOS 10